#BURMA #ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ #ANP# ညီလာခံ (သံတွဲ) သို့ ပီးပို့အပ်သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ – democracy for burma
democracy for burma
Burma Myanmar news
ABSDF North Spy case Conferences documents
Election Laws doc. and voices
WIKILEAKS BURMA DOCUMENTS
88 generation students’ timeline
#BURMA #ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ #ANP# ညီလာခံ (သံတွဲ) သို့ ပီးပို့အပ်သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ
On September 26, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ညီလာခံ (သံတွဲ) သို့ ပီးပို့အပ်သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီညီလာခံကိုကျင်းပပြုလုပ်နိူင်သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဤညီလာခံသည် ရခိုင် အမျိုးသားရီး လှုပ်ယှားမှုသမိုင်းသစ်၏ ထူးခြားသော စာမျက်နှာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အတွက်မော်ကွန်းဝင်မည့် မှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ညီလာခံသို့တက်ရောက်လာကတ်သော ကိုယ်စား လှယ်များအနီဖြင့် အမျိုးသားရီးအတွက်အရီးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိူင် ကတ်ပါစီကြောင်း ဆုမွန် ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
နိူင်ငံရီးပါတီတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းသည် အထူးအဆန်းမဟုတ်သော်လည်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ကို သာမန်နိူင်ငံရီးပါတီဟူ၍ မယူဆပါ။ သူ့ခေတ်သူ့ အခါ အလျောက် အောင်ပွဲခံခကတ်သော အထင်ကရအမျိုးသား ရီးပါတီ နှစ်ခုသည် တိုင်းပြည် တာဝန်ကို စုစည်းညီညွတ်စွာ ထမ်းဆောင်နိူင်ရန် ပူးပေါင်းခကတ်ခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် အနှစ်သာရအားဖြင့် လေးနက်လှပေသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိရို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်သည် ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီအပေါ်တွင် မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားဟိကြောင်းကို သိဟိစီလိုပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများသည် ယခင်ထက်ပို၍ကြီးမားသော အမျိုးသားရီးစိန်ခေါ်မှုများနှင့် နိစဉ်နှင့်အမျှ အနှုတ်လက္ခဏာပြကာဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာနီသော အခြီအနီများကို မျက်မှောက်ပြုနီကတ်ရပေသည်။ ဤ အနီအထားများ ကို အဖတ်ဆယ်ကာ မိမိရို့၏ လက်ဟိအခြီအနီနှင့်အကျပ်အတည်းများကို ရင်ဆိုင်ဖြေယှင်းရန် အတွက် စုစည်းကျစ်လျစ်သော ပါတီတစ်ခုကို ဒုက္ခနွံတွင်းထဲရောက်ရခိုင်လူထုနှင့် ပစ္စက္ခရခိုင့်အမှောင်သမိုင်းက တောင်းဆိုလျှက် ဟိနီပါသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြီခံဥပဒေကို မထောက်ခံသော်လည်း မျက်မှောက်ကာလ မြန်မာ့ နိူင်ငံရီးအခင်းအကျင်းများနှင့် မိမိရို့ရခိုင်လူမှုဘဝ၏ အခက်အခဲများကိုဆက်စပ်ကာ အကောင်းဆုံးအခြီအနီ များကိုသုံးသပ်ရှာဖွီပြုလုပ် လျှက်ဟိနီပါသည်။ လက်ဟိမြန်မာ့နိူင်ငံရီး အလားအလာများက အလွန်တရာ ဝိရောဓိဖြစ်စရာကောင်းသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ခရီး ဆက်လျှောက်လှမ်းနီ ကြောင်း ဖော်ပြနီသည်ကိုတွိမြင်ရပါသည်။
ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်မည်ဟု ကြွေးကြော်နီသော်လည်း အဆက်မပြတ်နိူင်သော ကိုလိုနီပြုမှုများနှင့် သိမ်မွေ့စွာရောပြွမ်းလျှက်ဟိနီသည်ကို ထင်ထင်ယှားယှားမြင်တွိနိူင်ကတ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ် ဟူသော စကားလုံးကိုတောင်မှ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ၊ လိုလိုလားလား လက်သင့်ခံနိူင်သည့် အနီအထားသို့ပင် မရောက်သိသည်ကို သတိမူသင့်ပေသည်။ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော အမျိုးသားအခြီခံ မိမိရို့ပြည်နယ်များ သည် ဤပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်လူမျိုးစုကြီးတစ်ခု၏ အချုပ်အချာအာဏာ လက်ဝေခံမဟုတ်ကြောင်းကို ယှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအယူအဆကို မြန်မာလူမျိုးများ ကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်လက်ခံလာရန်လိုအပ်ပေသည်။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရီးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မည်၊ မအောင်မြင်မည်ကို အထူးတလည်မပြော လိုပါ။ သို့သော် အနည်းငယ်မျှသောပွင့်လင်းမှုကိုအသုံးချကာ မိမိရို့ရခိုင်လူမျိုးများအတွက် ကောင်းကျိုးတစ်စုံ တစ်ရာကို မရမကဆောင်ကြဉ်းပီးရမည်မှာ ကျွန်ူပ်ရို့၏ အဓိကကျသောတာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပွင့်လင်း သယောင် နှင့် ယှုပ်ထွီးလာနီသည့် အနီအထား၏မရေရာမှုများကို ကျွန်ူပ်ရို့အတွိအကြုံအရ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမှုဖြင့် အဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ကာ ခရီးဆက်ကတ်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရီးအရသော်လည်းကောင်း ၊ ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများအရသော်လည်းကောင်း၊ ကြိုက်သည်ဖြစ်စီ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စီ၊ လက်ခံသည်ဖြစ်စီ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စီ လက်ဟိဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအောက်မှ ဂနိနိူင်ငံရီး အခင်းအကျင်းတွင် မိမိရို့ရခိုင့် အမျိုးသားရီး ၊ နိုင်ငံရီးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တတ်နိုင်သည့်ဖက်က အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ကတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်အခါအလိုက် ပွင့်လင်းလာသော အနီအထားတစ်ရပ်ကို တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုးအတွက် အမိအရ ရယူလုပ်ဆောင်ရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းစုစည်းညီညွှတ်စွာဖြင့် နည်းလမ်းတကျဆောင်ရွက်နိူင်ပါက ကျွန်ူပ်ရို့၏ မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းဗျူဟာ ခရီးတစ်ထောက်ပင်ဖြစ်လာနိူင်သည်ကို အထူးသတိပြုအပ်ပေ သည်။ ဤသို့သော အခြီအနီကောင်းများကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိူင်မှုမှတစ်ဆင့် အမျိုးသားရီး အခြီခံအုတ်မြစ် အဆောက်အအုံများကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချအားသစ်လောင်း၍ ရခိုင့်အိမ်မက်၊ ရက္ခိတ ရည်မှန်းချက် အတွက် အနာဂတ်ခရီးကိုဆက်ကတ်ရပေမည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဆိုသည်မှာ ရက္ခိုင်အမျိုးသားတပ်မတော်ဖြစ်ပေသည်။ ရက္ခိတလမ်းစဉ်ကို ခိုင်မာပီပြင်စွာ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ကာ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသော အမျိုးသားတပ်မတော်အဖြစ် တာဝန်ယူလျှက် ခရီးဆက်လျှောက်လှမ်းနီပါသည်။ မိမိရို့၏ အမျိုးသားရီးယုံကြည်ချက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ကာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားရီး ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်စွာရောက်ဟိနိူင်ရီး အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်း လက်တွဲလားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်ပြောလိုသည်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားရီးစိတ်ဓာတ်နိူးကြားမှု အားကောင်းနီသော်လည်း မှန်ကန်ယှင်းလင်း သော နိူးကြားမှုမျိုးဖြစ်စီလိုပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တင်းမာစွာ သဘောထားကွဲလွဲခြင်း ၊ မိမိယုံကြည်ရာကို သာ အလွန်အမင်းရှိတန်း တင်ကာ ပြောဆို
ဆွေးနွေးခြင်းစသည့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရီးများကို ဇက်ကုန်ဖွင့် ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်အခါနှင့် အခြီအနီမကျရောက်သိပါ။ ညီညွတ်ရီးသည်သာ ပဓာနကျကြောင်းကို အထူး တလည် အလေးထား ကတ်စီလိုပါသည်။ ပါတီ၏ဂုဏ်ဒြပ်ကို အသုံးချလို၍ ညီညွတ်ရီးကိုခုတုံးလုပ်ကာ အမျိုးသားရီးအရီခြုံ အချောင်ခိုသမားများနှင့် သစ္စာဖောက်များဝင်မပါလာမိစီရန် သတိပြုကတ်စီ လိုပါသည်။ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရီးရပ်တည်မှုမှသည် အမျိုးသားရီးအောင်ပွဲသို့တိုင် ညီညီညာညာချီတက်လျှောက်လှမ်း နိူင်ကတ်ပါစီဟု ဆန္ဒပြုလျှက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီညီလာခံ (သံတွဲ) ကို ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
စစ်ရုံးချုပ်၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်။ cr.Nyo Twan Awng
ANPARAKAN ARMYBurmaMyanmarRakhine Stateworld focus on Burma
#THAILAND #IEAT #combines #5 #border #areas into #Special #Economic #Zone –
#คุณหมออังกรูฯ #ส่งทนายความ #ยื่นฟ้อง “#เสก #โลโซ” แล้ว!!
အရေးတျောပုံအောငျနပွေီ Shadow Assassin Alliance
There is no hit list
ယနေ့ ( ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ ) မွင့် ခါး ပွဲ များ
ပနျ ဆယျ လို The World most Expensive Ukulele
Military council plans to seal NUG Deputy Health Minister’s house
6 Burmese Soldiers Desert to SSA
#SHUTDOWN #BANGKOK #ข่าว #ด่วนค่ะ..พี่น้องการ์ดทุกๆเวทีโปรดทราบ <ช่วยแชร์ต่อ..เพื่อให้ทุกคนระวะงตัวด้วยนะคะ <ขอบพระคุณค่ะ
Drugs found at abandoned Burma army post in Kachin state
Islamic Leaders Officially Explain Meaning of " 786 "
#THAILAND #BODY #HANSPETER #SUTHER #FOUND #Lamare #beach #Chumphon
TO ETHNIC LEADERS: How to Win Friends & Influence People by U Nu (Burmese Version)
MUST READ !!! Threat To Buddhism In Myanmar And The Arming Of Rohingyas – OpEd
#myanmar #burma #Great #Bell of #Dhammazedi #located
#BURMA #MYANMAR #MODEL #DIED
Sri Lanka To Ban Time Magazine: "The Face Of Buddhist Terror"
88 students 2010 Election ABSDF ANTI GOVERNMENT ANTI GOVERNMENT PROTEST Arakan Asean Bangkok Bangladesh BDC Bengali BGF Buddhism Burma Burmese Army Burmese Monks china CLIP CRIME Daw Aung San Suu Kyi Democracy DKBA DKBA Killers Drugs ETHNICS EU FREE BURMA Genocide Government Human Rights India Information Junta Kachin Kachin State Karen KIA KIO KNLA KNU malaysia Meeting migrants Mon monks Myanmar NEWS NLD Occupy Bangkok PDRC Police political prisoner political prisoners prisoner Protest Rakhine State refugee Rohingyas SHAN shutdown bangkok so-called Rohingya SPDC statement Thai-Burma Border Thailand THAIUPRAISING Thugs and Thieves Trial UN US USA U WIRA THU Video WAR world focus on Burma
THAILAND STRONGER TOGETHER
Join 4,583 other followers